Ny taona 2019, oniversite taminà faritra maromaro no naorina. Amin’ity taona 2020 ity dia hotohizana ny asa fanapariahana ny fianarana ambaratonga ambony ka ny tanjona apetraka dia ny fananganana Oniversite efatra vaovao any Taolagnaro, Antsohihy, Sambava ary Maintirano. Hisy ihany koa ny fananganana ny trano fonenana sivy vaovao ho an’ny mpianatra. Hiroso ihany koa amin` ny fanarenana ny Campus eny Vontovorona. Hisy hatrany ny fampitaovana an` ireo fanorenana rehetra ireo sy ny sampandraharaha tena mila izany ihany koa. Ezahina ny hahatonga ny tanora Malagasy farany izay betsaka hiditra an-tsekoly amin’ny alalan’ny fampihenana ny elanelan’ny toeram-pianarana sy ny toeram-ponenana.